Sangano rinomiririra varairidzi veku maruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, nezuro rakaita musangano mudunhu reInsiza rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yekurwira mihoro yakakwana yevarairidzi kubva kuhurumende.
Mutungamiriri wesangano iri, VaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti mumusangano uyu, uyo wakaitirwa muFilabusi, makabvumiranwa kuti varairidzi varonge kuramwa mabasa zvekare kana hurumende ikasakurumidza kugadzirisa zvichemo zvavo, zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora reku America.
VaMasaraure nesangano ravo vakaramwa mabasa masvondo mashomanana apfuura ivo vaMasaraure vakambopambwa pamba pavo husiku nevanhu vavaifungidzirwa kuti vasori vehurumende.
Masvondo matatu apfuura, VaMasaraure vakasungwa nemapurisa vakazoregedzwa vachipomerwa mhosva yekusaenda kunozviratidza kumapurisa pazuva ravaitarisirwa, izvo zvaidikanwa pasi pechibvumirano nemapurisa chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Musangano weku Filabusi hauna kutara mazuva ekuramwa mabasa asi VaMasaraure vati zuva rekuramwa basa richaziviswa kana sangano ravo richinge rapedza kuita misangano nenhengo dzaro mumatunhu ese.